7 Strategies maka asingbawanye Ahịa ahịa na-ere na Rlọ Ahịa Aka Gị | Martech Zone
Atụmatụ 7 maka ịbawanye na ahịa ndị ahịa na nre ahịa azụmaahịa gị
Na Tọzdee, Septemba 16, 2014 Monday, September 15, 2014 Tori Atkinson
Na ụwa nke mkpọsa, atụmatụ bụ ihe niile. A na-emefu ego na usoro azụmaahịa na nke ahụ pụtara na ndị nwe ụlọ ahịa kwesịrị ịmepụta ihe ma ọ bụrụ na ozi ha bụ ịbawanye ego ndị ahịa. Luckily, e nwere ọtụtụ nke na-agbalị na-anwale si eme na ike iji mee ka ndị ahịa gị na-emefu ihe, na ọtụtụ mgbe - na anyị na-achọ ka ị na ụfọdụ ahịa nzuzo otú i nwere ike ịhụ na ihe niile dị mkpa ahịa agbam ume gị ụlọ ahịa.
Mmetụta mmetụta - Nkwalite bụ ihe dị ike - ma ọ bụrụ na azụmaahịa azụmaahịa gị nwere ike ịmepụta echiche nke ịdị ngwa, ahịa niile ga-ekwe nkwa. Gị zụrụ ihe n'emeghị mkpali Akụkụ - nke a ga - achọta n'okporo ụzọ ruo ire - ọ bụ ebe kachasị mma maka ịzụrụ obere na mgbakwunye na-enye ego, nkeji oge ikpeazụ na nkata ịzụ ahịa ha.
Aghụ ụgha - ire ​​ere bụ usoro ahịa ahịa ochie nke gosipụtara na ọ na-emetụta ahịa. Ọ bụghị naanị na ihe 'ire ere' - agbanyeghị ezigbo mbelata ọ bụla ma ọ bụ nke echepụtara - na-ere dị ka hotcakes na nkwalite nwere oke oge, mana ọbụlagodi echiche ịre ahịa ezuola ịchụpụ ego na ngwaahịa. Ire ere ma ọ bụ ire ere.
Nnukwu omenala - otu ụzọ aghụghọ nke ịbawanye ndị ahịa na-emefu kwa nleta na ụlọ ahịa gị bụ site na ịba ụba na ọdịbendị. Site n'iwepụta ngwaahịa gị dị ka akụkụ nke nnukwu ihe, na-akwalite dị ka ohere ịchekwa ego, ndị ahịa ga-awụli elu iji weghara aka ha niile ma ọ bụrụ na ịchekwa ya maka ha.
Oke oke - A ga-enye ngwaahịa ndị dị oke oke ọkwa nke ha kwesịrị - yana site na ịgbaso iwu ahịa azụmaahịa, ị nwere ike ijide n'aka na ị ga-erite uru nke akụkụ ndị ahụ. Cingtọba ihe ndị dị elu n'akụkụ ọnụ ụzọ ụlọ ahịa gị na-ekwe nkwa na a ga - achọpụta ha - ma mee ka ohere ha nwere jupụta nkata ndị na - enweghị isi.
Ike mmetụta - romepụta ihe mgbakwunye gị na ụlọ ahịa gị bụ ụzọ dị mma iji na-ebuwanye ahịa. Ndị ahịa gị na-anụ ísì bụ isi ihe na-akpata omume ịzụ ahịa ha, ya na ngwaahịa ndị dị ka ihe eji esi nri na okooko osisi na-eme ka mmiri gwọọ mgbe etinyere ha nso. Inwe ike ịrịọ ikike nke ndị na-eri ihe na-enye gị ahụmịhe ụlọ ahịa ihe ọzọ - ma na-akpalite ịzụrụ ihe na-enweghị isi.
Nweta amachiri - The ụzọ kasị mma na-ekwe nkwa gị ahịa ịzụta gị ngwaahịa bụ akpa nkwa na ha na-ahụ ha. Otu ụdị ahịa ịzụ ahịa na-ere ahịa bụ idobe ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị na azụ ụlọ ahịa ahụ, na-ahụ na ndị ahịa ga-esi n'otu akụkụ ụlọ ahịa ahụ gaa na nke ọzọ tupu ha achọta ha. N’ụzọ a, ha agaghị ahapụ ụlọ ahụ n’enweghị anya nyocha nke ngwa ahịa gị.
Line nke anya - Anya ahịa ndị ahịa gị bụ isi ihe na - emetụta omume ịzụ ahịa ha - ọ ga - abụrịrị isi ihe ga - enyere gị aka ịzụ ahịa. Ekwesịrị itinye ngwaahịa tiketi ukwu na anya anya, na-ahụ na a hụrụ ha na-enweghị mkpa ngosi nkwado gabigara ókè. Chọghị ndị na-azụ ahịa ga-arụ ọrụ iji chọta ngwaahịa gị - yabụ mee ihe ndị dị mkpa iji jide n'aka na naanị ebe ha na-achọ bụ kpọmkwem ebe ha kwesịrị ịnọ.
Y’oburu n’ichoo ihe nzuzo izu ahia, ichota ya. Nke a ndepụta zuru ezu bụ isi ihe na-ere ahịa ahịa ahịa ikuku, na-ekwe nkwa na ị na-edepụta ụlọ ahịa gị maka uru - na-ahapụ gị ịnọdụ ala wee nweta uru ya.
Tags: 4 nkennukwu omenalamkpali mmetụtaahuru anyaoke nkewangwá ahịaọnyịnyepricengwaahịaanaghị ere ahịaere ahịausoro ire erenro ire ahiaike sensoryNkwado mkpọsa ahịa sinso
Tori Atkinson bụ onye mepụtara ọdịnaya Nkwado Mgbasa Ozi Sinso, na-enyere ndị ụlọ ahịa nọọrọ onwe ha na ndị dị nro aka ịkwado ụlọ ọrụ ha ka nwee nnukwu uru.
Kedu otu Twitter si enyere gị aka ịbanye Njikọ miri emi
Atụmatụ 14 maka ịba ụba ego na saịtị Ecommerce gị